magrah: sad kungani umyeni wami ukuthola bohongnya kunamandla ,
sad kungani umyeni wami ukuthola bohongnya kunamandla ,
sad kungani umyeni wami ukuthola bohongnya kunamandla , wayeyoba kunalokho akhetha ukuhlala ekuziphatheni amanga I kakade kusukela athandana ngaphambi komshado kodwa kuze kube manje sinazo cishe iminyaka emithathu . Kubandakanya njalo abeke izaba ukulinganiselwa futhi kancane ophikelelayo empini . Kodwa mina abamthandayo. Kwanele nje ukubeka ebhekene indoda efana labantu zithi .. LigaTaruhan Agen Bola, Agen Sbobet, Agen Ibcbet, Agen 338A Terpercaya ?
' Futhi thandazela le ndoda embi lapho ethandaza kube kuhle . futhi sidalwe nakho uphuthume " kuyiSurah Al - Israyeli ' : . 11
Esinye sezizathu esenza abantu bathande ukuba amanga ngenxa ukukhathazeka nokwesaba engqondweni yakhe . Kungenzeka ukuthi kwaba kuyadabukisa noma abuzwe ukuziphatha ezingemnandi ngenxa izingane noma imvelo . Njengomuntu indlela ukuzivikela esingokwemvelo ukuqamba amanga ukumboza izikhali ecasulayo eqaphela ukwethuka yakhe noma ubuthakathaka . Lathi ngobuqotho ukwethuka uma abanye ukuba bazi ubuthakathaka yakhe ukuba abe meremehkannya . Akuwona amanga ukwethuka uma abanye ziba likeable xaxa . Nakuba nakini njengomfazi .
" Mhlawumbe eqamba amanga Ukuvimba lwakho nokugcina ngaye ngokuthile ufuna noma mhlawumbe ukuze uhlale ukujezisa naye ngokuthile uyayazi doping kabi ngabo .... " Lorenz , K encwadini yakhe , On ulaka
Akukona okungavamile amanga kwenziwe ukuze bachithe kuso ubuhlobo noma simo . Kwenziw umi kokulibala isikhathi phansi ucwaninga nezimo ezifanele okukhulula . Kanti okubi , lolu hlobo umyeni enqaba ngokukhululekile ukusho imizwa yakhe yangempela . Yena kuhambisane nesivinini sokufunda komfundi simo asenzayo alangazelela ukwaneliseka ngokocansi bese ukumduduza .
Izicelo kanye amathemba akumelwe kwenziwe ukuba ukhathazeke futhi hhayi njalo saholela ukukhungatheka . Njengoba ejwayelekile umdlali ukuziphatha iphephile ke kubonakala kancane olukhuni ekulweni for the izifiso namathemba , futhi akhethe basafuna noma ukwenza izaba justifier of " ukwehluleka " . Indlela yokuziphatha ukhethwa ukugwema ukudelela nangenhlonipho ngenxa yalokhu of ukukhungatheka .Uma uthole ezinye ukuziphatha izaba zokuthi kwaphumela umyeni wakhe ngokuba ungumqambimanga ..
Bese uqale ukucabanga isizathu ukhetha ukwenza emuva umholi ekhaya lover . Ukuthambekela wena wayethanda ukuziphatha umyeni ubani umkhuba ukuqamba amanga ngoba indoda ibukeka kanje :
· Umuzwa ukhululekile ukuba imbangela yakho ngoba awufuni izingxabano , wesabe inyumbazane futhi i ward eziphuthumayo endaweni maqondana . Nakuba ukwenza lokhu kumelwe alale okungenani ukuthulisa imizwa yakhe siqu . Ngakho-ke wena ulethe berupayalah umuzwa ukhululekile kumyeni wakhe uma yena unecala , ukwehluleka noma aphikisane isitatimende sakho . Uze unomuzwa akumelwe amanga ukuletha into yangempel· Umyeni wakho uthanda lo ukuhambisana noxolo ukuthi kufanele njalo kugcinwe kuze mengkondisikan ngokwakhe ukwamukeleka hhayi yasenqaba khona
kwakhe . Ngakho-ke bonisa ukuthi uyakwazisa imibono yakho ingase ungavumelani ngisho nalo . Ukhule umuzwa yokuthula yena kuqala ngaphambi kwakho icacise ukuvinjelwa langempela imishado ngempoqo .
· Mayelana ukuntuleka lokulwa ngethemba Esephethe ngaphezulu futhi ngenxa yokungabi ngokwengeziwe kwaba induduzo yakhe indawo ngenxa sesabe memiliih badumazeka uma behluleka . Ukubhekana lokhu umuzwa esiyigugu yathela kuye amagama okubonga kanye abonge ukuthi umzabalazo futhi afinyelele . Waze wazizwa ngaleyo ndlela kuba ukuzethemba positive ukwaneliseka impumelelo. Kanjalo uyobe zama ukufinyelela indlela engcono ngcono ukwaneliseka nempumelelo kule mpi ezayo .
" Yiba nesineke umyeni ukuziphatha ungayithandi , ukuthola izizathu kungani ukhetha njengelungelo le ndoda elilandelayo kuze lo ukuzibophezela nti basekhaya ndawonye
Posted by Juragan Channel at 2:17 PM
Samee Healthy anfacaya oo Medicine ragga Si Buka-b...
Business opportunity with small capital
Conas a Whiten Skin
sad kungani umyeni wami ukuthola bohongnya kunaman...
Ị mgbe ụfọdụ na e hụrụ na-adịghị ike na Sagittariu...